Google Earth Vaovao – Hafa Beta Handray Ny Fofon'aina Lavitra
Google Earth Voamarina : Indray mandeha ianao izay nahita ity, ianao;ll mila 5 minitra mahazo ny fofon'aina miverina! Avy eo, azonao atao ny Travel.
Ny zava-miafina Ny PSP Fakantsary Misarom -!
Ny Portable Fakantsary ho Sony PlayStation efa misy ny foto-kevitra iray manontolo maro ny sain'ny maro saingy na dia kely aza ny vaovao ao amin'ny lava-dalana ny famoahana azy. Noho izany, eto dia ny sasany amin'ireo vaovao momba ny fakantsary PSP. Raha toa ianao ka efa zatra ny Wii sary fomba, azo antoka fa ianao dia manaiky ny maro fa design ity PSP fakantsary fomba fijery ho an'ny sary/horonan-ny fitantanana. Ny 1.3 mega pixel fakan-kevitry ny rindrambaiko mamela anao hankafy ny functions iray matanjaka sary mpizaha ary na sary tonian-dahatsoratra. Tsindrio ny iray amin'ny bokotra sy ...
Misy zavatra maro izay mety hisy fiantraikany eo ny PCs performance. Avy viruses sy ny spyware mba miafina ny fahadisoana sy ny tsy hita popoka rindranasa rakitra, tsy misy farany ny mety ho meloka izay mety ho slowing solosainao midina. Nahita na dia iray mpanao ratsy dia tsy afaka ny hitondra anareo ora maro tamin'ny ora mikaroka ny kapila mafy ary mety tsy dia ho mahomby. Nanampy fa, dia ny marina fa tsy mety ho mihoatra ny 200 ny antony mahatonga ny solosaina dia tsy manao toy izany ampiasaina. Miaraka amin'ny isa l...
Ny tontolo an-tserasera dia mety ho iray mampatahotra toerana ary indraindray mety hahazo downright nasty. Avy viruses sy ny spyware amin'ny aterineto ny mombamomba ny halatra, ny mombamomba voatahiry ao amin'ny ny solosaina dia eo ambany sanda tsy miova fanafihana izany ka tokony arovana amin'ny fandaniana rehetra. Nahoana? Unscrupulous aloha dia mitsahatra amin'ny zavatra mahazo anao sarobidy ny mombamomba, ary ianao hijanona dingana iray mialoha azy ireo mba hahazoana toky fa izy tsy. Avelao hanomboka ny fikarohana ny antony nahoana isika no tokony hiaro antsika PCs amin'ny p...
Bluetooth Stereo Headset Mividy Ny Fomba Fiheverany
Fitaingenana ny onja ny vaovao, hot zavatra ara-teknolojika ny fiandohan'ny taonjato faha-21 tsy mitsahatra ny Bluetooth stereo headset. Amin'izao fotoana izao, Bluetooth fananana fahaiza-manao tolotra bebe kokoa ny tolotra sy ny kasinga noho ny tany aloha tany, anisan'izany Bluetooth stereo headset. Rehefa mitady stereo headset, maro lehibe marika hanolotra nice selections, saingy tsy misy noho izany zavatra tsara ho an'ireo izay natolotry ny Motorola. Motorola no mandray ny fitarihana rehefa tonga mandrafitra mahasarika sy spiffy kasinga mba complement Bluetooth w...
Pen Kapila Ho Toy Ny Tanjona Farany Ny Fomba Fitaterana Data
Isika tonga lavitra ny lalana avy ny fotoana rehefa zana-kapila angamba disks no fomba asiana sy mitondra ny angona avy amin'ny solosaina iray hafa. CD-ROM sy DVD ny nosoloina zana-kapila angamba disks ho an'ny fitaterana data saingy izy rehetra ireny dia tsy tena handy. Ny mpampiasa ny solosaina craved ho an'ny zavatra izay afaka mitondra mora foana ao amin'ny paosy ary na ny maha-kely ny zavatra izay afaka mitahiry goavana habetsahan'ny data. Ny Pen Mpanodina dia nisongadina ho toy ny vahaolana ity. Miditra sy ny fitaterana data efa vita ihany ...
Inventory ny Fikandrana tambajotra sy hahazo mazava tsara ny tatitra!
PC Inventory Mpanolotsaina mandraikitra ny fotoana ary mitaky lefy ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko sy ny hardware fanamarinam-amin'ny lehibe ny miverina sy tahiry. Manana ny zava-drehetra ianao mila ho mahomby solosaina inventory. PC Inventory Mpanolotsaina hoazy queries rehetra solosaina momba ny tambajotra sy ny tatitra miverina amin'ny antsipiriany momba ny OS sy ny hotfixes, voapetraka ny rindran'asa sy ny hardware, mandeha ny asa sy ny tolotra, vaovao ilaina fa hiseho, - jo-ny amin'ny-ny fotoana tambajotra fanairana ka hita raha ampitahaina amin'ny configurations. Miaraka rehetra dia manasongadina ny azy dia, PC Inventory Mpanolotsaina mahatonga ny PC fanamarinam - breeze!
S2s Ltd dia UK mpanome amin'ny fakana ny hevitry ny tambajotra sy ny fametrahana sampan-draharaha fa ilaina ny angona fiarovana mba hiantohana ny fandraharahana continuity, na dia ao anatin'ny hetsika iray mpizara breakdown. Securstore dia tonga miaraka amin'ny vahaolana.
Ny Data sy ny ezaka fanarenana Ny Solosaina
Data ezaka fanarenana noho ny solosainao
Cisco CCNA Fanadinana Tutorial: Hafa Ny Mpaneran'ny
Nahoana no mampiasa hafa mpanera? Mianatra ny antsipiriany ao amin'ity Cisco CCNA tutorial avy Chris Bryant, [object Window] #12933.
$Mihevitra ny mpanonta printy DPI (teboka maro isan-isaky ny santimetatra) [object Window], izay no fanapahan-kevitra ao amin'ny izay afaka manonta sary sy ny tahirin-kevitra. Ny ambony DPI (teboka maro isan-isaky ny santimetatra) ianao, ny tsara kalitao ianao dia manana tany na soratra na sary printouts.
Maro ny olona fotsiny mankany amin'ny mpaninjara store sy mahazo amidy rehefa tonga ny computing fitaovana. Ianao dia mety ho tena gaga ny fomba mora foana ianao afaka mandray miakatra rehetra ny tena fototry ny anisan'i ary mifamotoana ny tenanao na ny nahazo ny namana na ny fianakaviana ny mpikambana ao amin'ny mahafantatra ny hanao azy io ho anao.
Kahie Mafy Kapila Ezaka Fanarenana
Ny fiaraha-monina dia hatrany ao amin'ny mamindra; noho izany dia tsy mahagaga fa ny finday solosaina no fitaovana nofidiana ho an'ny androany movers sy ny shakers. Maro ny PC varotra ny tatitra dia nampiseho fa mihamaro ny olona mampiasa ny solosaina, na ny kahie solosaina isan-taona. Maro ny antony mandray anjara amin'ity fironana mitombo. Ny teknolojia ao ambadiky sy ao anatin'ny kahie solosaina dia handroso amin'ny miavaka pace, sy fanatsaràna ireo tonga saina amin'ny tsirairay vaovao modely izay nianjady ny tsena. Ny noteboo...
Misy karazana maro samihafa karazana fahatsiarovana, ary izany dia zava-dehibe ny hoe ianao no misafidy ny fahatsiarovana izany no mifandrindra amin'ny ny solosaina kahie.
Ny Fanadiovana Ny Rejistra Sy Ny Fitomboan'ny Solosaina Hafainganana
Rejistra madio no software fa cleans miakatra ny rejistra momba ny solosaina mba optimize ny zava-bita sy ny sped. Rejistra dia ny toerana eo amin'ny solosaina izay tena iankinan'ny ain-dehibe ny angona momba ny fikirakirana sy ny voapetraka ny rindran'asa no voaraikitra mba hahafahan'ny indray ny rafi-hampiasa izany. Izany dia applet ao amin'ny fonosana ny rafitra ampiasainao. Izany manodina ny tatitry ny asa ny P. C. ary mety ho tsara raha oharina amin'ny concurrently nanavao jereo ny lisitry ny fanaovana ny lisitry ny th...
Dia Ny PC Crowding Ny Birao?
Rehefa ny PC eats miakatra saika ny toerana iray manontolo ao amin'ny solosainao ny latabatra, ny fotoana dia kely indray fikarakarana. Solosaina Desktop, indrindra indrindra fa ireo bulky CPUs sy manara-maso tsy afaka mihinana up efa misy ny toerana izay mety misy efitra ho an'ny hafa essentials toy ny laha-tahiry stackers, telefaonina na fax milina. Amin'izao fotoana izao, bulky solosaina manokana dia afaka ny ho tena mavesatra ny maso, indrindra indrindra fa hatramin'ny ao todays teknolojia, ny fomba fiteny ny hoe, bulk dia nivoaka, thin dia ny mahazatra.
Verizon FiOS FAHITALAVITRA Dia Natao
Raha toa ianao ka monina ao New Jersey, Verizon ny FiOS FAHITALAVITRA dia azo jerena ho eo 250,000 tokantrano ao amin'ny faritra 106 ny vondrom-piarahamonina ao Bergen, [object Window], [object Window], [object Window], [object Window], [object Window], Somerset ary Union tanàna. FiOS TV fiber ambany ny teknolojia atsy ho atsy mivelatra ho an'hetsiny fanampiny tokantrano ao mihoatra ny 100 fanampiny fiaraha-monina. Ambany toetra vaovao streamlined lahatsary franchise lalàna, Verizon dia nanambara drafitra ho atolotra FiOS FAHITALAVITRA noho ny rehetra-fiber netwo...
Fanariana Taloha PCs Tsy “[object Window]”
Araka ny U. S. Envirnonmental Fiarovana Ny Sampan-Draharaha, manakaiky ny 250 tapitrisa ny solosaina dia lasa vata manaraka ny dimy taona. Indrisy, latsaka 20 isan-PCs misotro ronono ao amin'ny U. S. ireo barika indrindra taona, fa tsy am-inona no maha-hosokajiana "e-ny fako."
Androany&#8217;s avo lenta Laptop vs. ny Sehatr'asa PC
Ahoana moa ny androany laptop mampitaha miaraka ny sehatr'asa PC?
Iray Concise Torolalana Ho MICR Sy Mifandraika Teknolojia
Magnetic Ranomainty Marika Ny Fankatoavana ([object Window]) dia mandroso mba handrisihana ny tombontsoa azo avy amin'ny ny solosaina ny teknolojia ao amin'ny ara-bola ny indostria. Talohan'ny ny fampiasana ny iray andalana MICR, jereo sorting araka ny kaonty maro no manual asa. Roa ny rafi-nisy teo aloha hifehezana ny isa maro fanaraha-maso azo ny ara-bola ny indostria: Avao--Matic ary Ambony Vakizoro Famaha Avao.
Fanontaniana Maro Mba Hanontany Solosaina Sekoly Fanofanana Mialoha Ny Fandoavana
Ny fanapahan-kevitra mba hanatrika ny solosaina tech sekoly iray lehibe iray, noho izany ianao dia tsy maintsy manontany ny zo fanontaniana mialoha ny fanaovana izany. Hianatra bebe kokoa momba ireto fanontaniana ireto avy Chris Bryant, [object Window] #12933.
Vetivety Dia Hiteraka Ny Iray Amin'ny Tambajotra Inventory
Tianao ve ny handray mifehy ny hardware sy ny rindrambaiko momba ny tambajotra, Izany dia mora sy vetivety, ny sasany Tambajotra Inventory software dia afaka manampy ianao. Ireo rindrambaiko manampy anao hahazo feno vaovao momba ny OS, [object Window], [object Window], [object Window], [object Window], ary mandeha ny asa amin'ny lavi-toerana PCs. Azonao atao ny mampiasa ireo Tambajotra Inventory software Mahita sy mamaky ny hira hardware sy ny rindrambaiko nandritra ny LAN na WAN ny tambajotra, hahafantatra raha manova mitatao amin'ny ny HOE ny Ilaina fa ianao mitantana, [object Window].
Totozy Tsy Hihaza Ny Sarimihetsika (Ny Fisafidiana Ny Totozy Tonga Lafatra Ho An'ny Solosainao)
Solosaina Totozy ny zavatra ianao wouldnt mandositra. Fa tsy, izany no zavatra iray ianao mety hitady. Raha ny marina, isaky ny vatana dia mikaroka ny ho tsara iray. Ary dia tena lasa tsy-ny sisa-mora ny asa hihaza ho tsara ny totozy ho ny pc.
Aho tena miteny ya, rehefa voalohany aho no nahazo ny solosaina rehefa izany dia marika vaovao, tsy niasa toy ny charm! Avy eo aho toy ny nahazo kely kokoa ny zatra azy, namana sy ny fianakaviana nanolo-kevitra aho andramo ny sasany an-tserasera ny rindranasa. Nisy iray ity cute volomparasy ape izay mety hanampy anao surf amin'ny aterineto.. na izany aho nieritreritra.
Izay dia izay; Solosaina finday mora vidy na Mora Sehatr'asa?
ny fisafidiana ny zo fanontana medium
Toy ny Internet ny fifandraisana lasa bebe kokoa maharitra amin'ny haingam-miditra, ny rindrambaiko ho afaka mivoatra ho lasa bebe kokoa ny mahomby sy ny personalized medium. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ireo rindrambaiko alefa avy amin'ny sarotra mihatra ary mila installations fa alter ny rafitra configurations, imbetsaka hampihena ny solosaina. Satria software occupies toerana sy ny fikirakirana ny herinaratra, misy voafetra habetsaky ny software izay afaka alefa any amin'ny PCs. Amin'ny lafiny fandraharahana, ity software rafitra takiana maro co...
Ny teknolojia amin'izao fotoana izao amin'ny fandefasana ny hafainganana, ianao dia mety hahita zavatra bebe kokoa manokana - arakaraky ny teknolojia avo lenta amin'ny andro faharoa solosaina nividy. Mety mahatsapa ny solosaina ianao dia mampiasa amin'izao fotoana izao dia kely nilaozan'ny toetr'andro, miala tsiny raha ianao no mampiasa ny vaovao PC nefa dia loatra. Izy io dia tsy mety ho an'ny maro amintsika mba hitazona miova taloha PCs amin'ny iray vaovao.
FANAFIHANA ijoroan'ny "Miverimberina izany Array Mahaleotena (taloha "[object Window]") [object Window]" FANAFIHANA angom mafy mihatra amin'ny solosaina fa tsy dia ampiasaina amin'ny zava-bita enhancement sy/na ny hadisoana fandeferana. Fikandrana mpizara valaka (Windows NT sy 2000 Ny mpizara, ary ny Fikandrana Mpizara 2003) manana karazana raiki-fanohanana ny sasany niakatra ny FANAFIHANA, nefa hardware mifototra amin'ny FANAFIHANA ny rafi-manome fanatsarana ny zava-bita.
Azoko An-Tsaina Ary Mahazo An-Trano Tambajotra Anisan'i
Raha tsy ianao no nanapa-kevitra efa,ianao atsy ho atsy, tsy te network ny roa na mihoatra ny solosaina ao an-tranonao. Ianao te-ho mitam-piadiana ny mampianatra miaraka amin'ny fahalalana fotsiny fa ny zavatra tena mila mifandray amin'ny ny solosaina iray hafa.
Arika Karatra – Versatile Fitahirizana Fampahalalam-Baovao Nomerika Ny Periferika
Fahatsiarovana ny karatra amin'izao fotoana izao ny maha-fitted ho saika isaky ny nomerika ny periferika. Ny fahatsiarovana na ny tselatra fahatsiarovana ny karatra maha-izy dia antsoina hoe ho toy ny fitahirizana haino aman-jery ho an'ny fakan -, [object Window], finday, ny fahitalavitra, mpanonta printy sns. Sary, mozika, sarimihetsika sy ny lalao daholo ny maha-voatana an-kely karatra fahatsiarovana. Misy iray manontolo elanelana arika karatra hita ao amin'ny an-tsena androany, toy ny PSP fahatsiarovana ny karatra, SD karatra fahatsiarovana, mpiaty flash karatra fahatsiarovana, kinga haino aman-jery ny fahatsiarovana ny karatra, fakantsary nomerika m...
Ny Teknolojia Avo Lenta Ny Toshiba Tablet Pc
Manasongadina ny farany taminy tao anatin'ny solosaina ny teknolojia, ny Toshiba Tablet PC dia kahie endriky ny solosaina natao mba hamela ny interactive manoratra ao amin'ny efijery. Ny dian-efijery ny teknolojia manome alalana ny mpampiasa hanoratra miaraka na iray stylus na digital pen. Famongorana ny tokony ho tsotra ny totozy ary ny kitendry mahatonga ny Toshiba Tablet PC tena tombony ho an'ny manampahefana ao amin'ny mankany. Ho mora ny fahazoana sy ny fampahafantarana capability, ny Toshiba Tablet PC incl...
Manao Sary Nomerika Aminy
Ity tetezamita dingana analog ho voakaly, ny tsirairay mahalala ny fahasamihafana eo amin'ny fomba isaky ny sary dia azo ho tsara manonta. Ho analog photography, ny ratsy (sarimihetsika) dia mivoatra anaty sary madinika ireo toeram-pivarotana antsoina hoe fampandrosoana studios, low-faran'ny na faran'ny ambony, misy ny sasany amin'ny faritra lavitry akaiky fametrahana. Ry zareo avy ao mora ny vidiny isaky ny fanaka nitifitra fa izy ireo no tonga lafo ao rolls. Io no conventional fomba accomplishing photography. Amin'izao fotoana izao...
Manao ny asa fandaharam-potoana bebe kokoa mandefera mampiasa ny fandraisanao ny PC fidirana ho ny birao remotely.
Anyplace Fanaraha-maso dia manome revolisionera vaovao vahaolana ho an'ny miditra miasa milina sy ireo vondron'orinasa harena remotely. Ny handao ny asany ny maraina ary vita ny asanao avy any an-trano!
Mety ho efa henonao angamba ny mikasika ny antso voip ny teknolojia na ny Aterineto telephony. Voice Over Internet Protocol no fomba fifaneraserana vaovao izay manome alalana anao amin'ny alalan'ny telefaonina ny Aterineto ho maimaim-poana na tao amin'ny tena vidiny ambany dia ambany. Mpandraharaha sy ny mpandraharaha no namorona ny indostria manerana na voip ny teknolojia any amin'ny endrika maro: desktop rindram -, telefaonina ny tolotra, ary ny vondron'orinasa finday rafi -. Na voip dia tena teknolojia manana lafiny maro. Hita fa maro dia maro ny fifandraisana amin'ny orinasa f...
Vaovao tsy manam-paharoa MultiCore AntiVirus & AntiSpyware ny vokatra
NuWave Software manambara ny fanafahana MultiCore AntiVirus & [object Window], revolisionera anti-otrik'aretina ny vokatra fa integrates efatra anti-malware fiara mpamono.
Inona No Tena Ao Ambadiky Ny PCs Mahantra Performance
Fitazonana solosaina mandeha mora sy haingana dia tsy-famaranana ny asa. Toa tsy misy ny fotoana taorian'ny ianao handray ny marika-vaovao PC nivoaka ny boaty, ny solosaina dia manomboka miasa ambony sy manao bebe kokoa tahaka ny taloha PC ianao nahazo ny hanàla an'i noho ny iray vaovao izany dia tokony ho. Raha ity dia tena manahiran-tsaina mihitsy, azo sorohana raha fantatrao hoe inona no nahatonga ny PCs mahantra zava-bita sy ny fomba hamahana ny olana ao ambadiky izany na tsy azy ireo any amin'ny toerana voalohany.
Solosaina Viruses: Topimaso
Solosaina no tsy mampino ny fananana fahaiza-manao. Izy ireo dia afaka hanatràrana zara asa lehibe, fifandraisana tsara, manao zavatra mamindra ary mihevitra mihoatra noho ny olombelona fepetra. Solosaina dia lasa toy ny olombelona ao amin'ny manodidina ny isan-conceivable fomba, noho izany dia tsy mahagaga fa ny solosaina dia afaka mahazo ny marary. Ny solosaina voalohany ny revolisiona nanomboka maka up hafainganana tamin'ny faramparan'ny taona 1980. Nanomboka hatreo, dia nivoatra ho tena iankinan'ny ain-dehibe ny singantaharo eo amin'ny fiaraha-monina, amin'ny sehatry ny fiaraha-monina sy ny manokana ny fiainana. Solosaina dia lasa ampahany sy ny ...
Tsindraindray Lavitra Sehatr'asa Miditra ho an'ny Fandraharahana sy ny Manokana ny Fampiasana
Androany ny tena sarobidy resource no fotoana. Vakio ny fomba hamonjena ny fotoana sy mampitombo ny mpiasa fandraisana andraikitra avy amin'ny mora ny-ampiasaina lavitra sehatr'asa fanaraha-maso software.
Tranonkala Mifototra Fanofanana Sy Ny Aterineto Alefa Ny Teknolojia
Vao taona vitsy lasa izay, tranonkala mifototra amin'ny fianarana amin'ny alalan'ny PCs dia hita ho toy ny revolisionera. Ny orinasa dia afaka mametraka ny orientations ary ny fivoaran'ny trainings ao amin'ny line sy ireo mpiasa tokony hahazo standardized ny fianarana. Tsy ho ela, ny fihanaky ny wifi, router-monina, ary mandeha amin'ny zanabolana tsy misy mpampitohy ny tambajotra, ny olona tsy tap ho ity karazana fanazaran-raha eny an-dalana. Iray salesperson afaka mahazo ny fahaizany any amin'ny farany haivarotra ny fampisehoana raha ny samy ao amin'ny fiaramanidina ho azy na ny manaraka aleha. Na ny olona iray cou...
Ny Zava-Drehetra Ianao Te-Hahafantatra Ny Momba Ny Fiverenana Amin'ny Finday Fikarohana
Nahoana No Handoavana Ny MySpace Layout? Nahazo Ny Iray Maimaim-Poana.
Zanabolana TV Lovia Avy Ao anatin'ny Telo Tsiro
Mahatsiravina Solitaire Fomba Guide
Ny Efijery Ny Kalandrie – Fikandrana Kalandrie Software
Manokana Rss Feed Mpamaky Software
3 Ny Zavatra Ianao Dia Mila Mahafantatra Ny Mikasika Ny Antso Voip
Mpanolo-Teknolojia Handefa IMJack
Toro-hevitra amin'ny fahalalana ny loza ny spyware sy adware
Online Casino: Discover l&#8217;ny Tantara ao amin'ny Lalao Video Casino
Inona No Atao Rehefa Ny Kitendry Fail
IZANY fanohanana: Faritra Andraikitra amin'ny Mpanjifa